Aluminium mpempe akwụkwọ
Aluminum eriri igwe
Aluminom tube / anwụrụ
Square aluminum tube / anwụrụ
Aluminom diski / gburugburu
Aluminom mmanya / mkpanaka
Ịgbado ọkụ waya
Dabere na "Echiche Nduzi Na-ewusi Mgbochi na Njikwa nke Ebe obibi Ebe E Si Nweta Isi nke" Twolọ Ọrụ abụọ "High Speed" nke Ministry of Ecology and Environmental Protection nyere ụbọchị ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ nhazi aluminom abụghịzi nke ụdị "Highs abụọ", mana aluminom electrolytic ka edepụtara n'etiti ha. Aluminom nwere akara abụọ: otu bụ "aluminom na-acha akwụkwọ ndụ"; nke ozo bu “elu abuo na otu isi obodo”. Akara aha abụọ a nwere nkọwa na-abụghị nke aluminom. Yabụ, kedu nke bụ nkọwa ziri ezi nke aluminom?
"Onye isi abụọ na otu isi obodo" pụtara ike ike dị elu, mmetọ dị elu na akụrụngwa. Nkwupụta a malitere na 2005, na ebubere ya mbụ iji chịkwaa mbupụ nke ụlọ ọrụ metụtara ya ma kwalite nkwalite nke ụlọ ọrụ ụlọ. Kemgbe ahụ, na akwụkwọ iwu nke ngalaba ndị dị mkpa nyere, a na-ekewapụta electrolytic aluminom dị ka ụlọ ọrụ "elu abụọ na otu isi obodo". Ka oge na-aga, nkwupụta a ghọrọ nkọwa nke ụlọ ọrụ ndị na-emepụta akụrụngwa gụnyere ụlọ ọrụ aluminom.
N'ihe banyere echiche nke "otu akụ," a maara nke ọma na aluminom bụ ọla nwere ọtụtụ ebe dị n'akụkụ ụwa. Agbanyeghị na akụ aluminom dị na mba m pere mpe, na njikọta akụ na ụba ụwa taa, akụrụngwa anaghịzị egbochi mmepe ụlọ ọrụ aluminium nke mba m. Isi ọkpọkọ. Dabere na ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu, mba m nwere ihe ruru ijeri tọn 10 nke akụ bauxite na mba ofesi, ikike ikike imepụta mines ruru nde tọn 90 kwa afọ. N'ime mbubata bauxite na-ebubata kwa afọ, 50% na-abịa site na ndị na-ere ahịa na ofesi ofesi nke ndị ụlọ ọrụ China nwere. , Ikike nke ịkwado akụrụngwa ka mma.
Ọbụghị naanị nke ahụ, mana nke ka mkpa bụ na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ aluminom nke mba m abụghị naanị na ọ naghị eyi ihe egwu ụlọ akụ bauxite, kamakwa ọ na-echekwa akụ maka mmepe ụlọ ọrụ aluminom nke mba m. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-edozi ọtụtụ iri nde tọn mbụ nke aluminom na mba m n’ime ngwaahịa aluminom dị iche iche kwa afọ. Ewezuga obere akụkụ nke mbupụ, ọtụtụ n'ime ha bụ oriri ụlọ. Ngwaahịa aluminom a eruola oge nkwụghachi ụgwọ mgbe afọ 20-30 gachara, nke nwere ike ịkwado mmepụta nke ụlọ ọrụ aluminom dị ugbu a na n'ọdịnihu. Ọ bụrụ na enweghị mmepe nke ụlọ ọrụ aluminom bụ ụlọ na mmepe nke ngwa ngwa aluminom, ụlọ ọrụ nke abụọ nke aluminom agaghị enwe ihe ọ bụla iji sie, ma ọ bụ na ọ ka ga-ebubata "mkpofu mba ọzọ", nke ndị ọzọ ga-egbochi.
Enwere ike ịhụ na iji etu ụlọ ọrụ aluminom si arụ ọrụ si na akụ nke akụ na ụba ka na-achọ ihu ụwa. Ka ọ dị ugbu a, arụmụka nke "otu isi obodo" megidere mmepe nke ụlọ ọrụ aluminom ugbu a wee mepee ajụjụ.
Banyere arụmụka "abụọ dị elu", ụlọ ọrụ aluminom dịka ụlọ ọrụ dị arọ enweghị ike ịgọnahụ kpamkpam, ọkachasị dịka electrolytic aluminom na ụlọ ọrụ na-ebu ike. Enwere ike ịsị na enweghị aluminom na-enweghị ọkụ eletrik. Agbanyeghị, electrolytic aluminom bụ naanị otu njikọ na ngalaba ụlọ ọrụ aluminom. N'akụkụ nke ngwa ahụ, ihe aluminom aghọwo nhọrọ mbụ maka ihe nchekwa ike na mpaghara dị iche iche n'ihi ịdị arọ ha dị nfe, mbibi corrosion, na imegharị ihe dị mfe.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmụpụta na mmelite nke teknụzụ na teknụzụ nke mba m na electrolytic, ikike nchekwa na mwepụ na-ebelata mmepụta aluminom abụghịzị nke nke ihe karịrị afọ iri gara aga. Na 2020, ọkụ eletrik kwa ton nke aluminom electrolytic na mba m ga-adị ala dị 13,543 kWh, mbelata nke ihe dị ka 8% ma e jiri ya tụnyere 2005. Nkọwa oriri ike anọwo na ọkwa kachasị mma n'ụwa ruo ọtụtụ afọ. N'ihe banyere ikuku anwuru ahihia, na 2019, ikuku anwuru nke gas na-ekpo ọkụ nke ọkụ eletrik na usoro aluminium na obodo m bụ 12.8, mbelata nke 24% ma e jiri ya tụnyere 2006, na ọnụego mbelata bụ ụwa na-eduga.
N'otu oge ahụ, ọnụego imegharị ihe nke aluminom nwere ike iru ihe karịrị 95%, enwere ike imegharị ya ọtụtụ oge. Agbanyeghị, oriri ike na gasị griin nke arụpụtara aluminom bụ naanị ihe dịka 5% nke nke aluminom mbụ. Ya mere, a makwaara ya dị ka "ngwaahịa nchekwa ike" na "aha nchekwa" Energy Bank ".
Ihe kacha dị mgbagwoju anya bụ na ikuku griin na ụlọ ọrụ aluminom bụ nke kpatara ike ọkụ, yana ike ọkụ bụ ụzọ isi nweta ike nke mba m, na-ede ihe karịrị 70% nke ike ọkụ zuru oke nke mba ahụ. Nke a bụ n'ụzọ doro anya site na nkwalite ụlọ ọrụ na nhazi nhazi na ụlọ ọrụ ike. Ajuju a, gini mere ka ulo oru aluminom na-elebara anya?
N'ụzọ dị mma, site na ọganihu nke teknụzụ nchekwa ume, a ga-eji ume ọhụrụ dị ka hydrogen, anyanwụ, ifufe, na hydropower mee ihe na mmepụta ihe. N'oge a, a na-amalitekwa ike ike nuklia nke mba m mgbe afọ iri kwụsịtụrụ. N'ọdịnihu, a ga-enwe ike iji ike carbon dị ala karịa maka iji ya.
Agbanyeghi na enweghi ike ileghara ike iri nri nke electrolytic alumini di na elu ulo oru aluminom, ihe di nkpa bu na ntinye na nhazi nke aluminium, o na egosiputa otutu ihe omuma ulo oru nke teknụzụ dị elu na nke nụchara anụcha, obughi nani na ihe ndi ozo. Ọrụ nke nnọchi, ma gosipụta mmetụta ya na-acha ọkụ ọkụ na-azọpụta n'ọtụtụ ebe.
Kemgbe afọ 2012, nke China Nonferrous Metals Industry Association duziri, ebumnuche ebumnuche bụ "Iwusi Green Aluminom Mgbasa Ozi na otingkwalite Iri Aluminom" ma wepụta nkwupụta "akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ aluminom" na ọha mmadụ. Mgbe afọ 9 nke mmepe, "green aluminom" ka ndị ahịa nwere mmasị na ya. Ihe ndị dị na aluminom aghọwo ikike ịkwọ ụgbọala ọhụrụ na ike bụ isi maka nchekwa ọkụ, mbelata nsị, mgbanwe na mmelite, na mmepe carbon dị ala na njem, owuwu na mpaghara ndị ọzọ.
Dabere na ọnụọgụ dị mkpa, n'ihe gbasara fechaa ụgbọala, enwere ike iji alloy rụọ ọrụ n'ụgbọala nwere ihe karịrị 500kg, nke nwere ike belata ibu nke ụgbọala ahụ site na 40%, na mbelata 10% ọ bụla nke ụgbọala ahụ nwere ike ịchekwa 3,5% ~ 6%, enwere ike belata lita mmanụ ọ bụla 1, na kilogram 2.33 nke ikuku carbon dioxide nwere ike belata. Enwere ike ịhụ na alloy nke aluminom nwere uru doro anya na ịchekwa ikuku carbon dị ala n'ọhịa ụgbọ njem. N'ọhịa ewu, ngwaahịa aluminom ugbu a na mba m eruola 80 nde square, yana oke ahịa nke 30% na nnukwu ụlọ elu na nnukwu ụlọ obibi. Ọganihu ngwa ngwa nke ụdị aluminom na-egbo mkpa nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nchebe gburugburu ebe obibi na ụlọ ọrụ na-echekwa ọtụtụ osisi. N'ebe a na-enye ubi ụlọ, ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi na-ahụkarị ahịa. Na ubi nke aerospace, ma ọ bụ nnukwu ụgbọ elu ụlọ ma ọ bụ ọrụ na arụmọrụ nke ọdụ ụgbọ ala m ugbu a, ọ nweghị nke ha nwere ike ịme na-enweghị onyinye nke aluminom. Ngwongwo ihe ndi ozo nke aluminom bu ihe di nkpa iji kwalite mmepe ngwa ngwa nke njem ugbo ala nke mba m. N'ọtụtụ ebe ngwa ngwa dị ka ike eletriki na iwu obodo, enwerekwa mgbagha na nnọchi nke aluminom na ọla kọpa, aluminom na nchara, na aluminom na osisi.
Eziokwu na-ekwu okwu karịa okwu ọnụ. Site na mmụba ngwa ngwa nke ahịa a na-achọ, mmepụta mba aluminom mụbara site na 7.81 nde tọn na 2005 ruo nde 37.08 na 2020. E mepụtara uto ngwa ngwa a n'okpuru ọnọdụ nke nnukwu njikwa mba na njide ejidere. Ọ bụrụ na enweghị mkpa Site na nkwado siri ike a, ọ gaghị ekwe omume ịgba ọsọ dị otú ahụ. Enweghi ike kwụsie ike nke ụlọ ọrụ alumini electrolytic, ọ ga-esiri ubi ndị ọzọ ngwa ike iji nweta ihe nchekwa dị ala dị ala, ikike nchekwa ike dị ike.
Ka ọ dị ugbu a, arụmụka nke "isi abụọ na otu isi obodo" emetụtala ezigbo aha ụlọ ọrụ aluminom. A na-atụ anya na ọha mmadụ niile ga-agbado n'echiche nke usoro ọrụ ụlọ ọrụ aluminom na usoro ndụ niile, mezie nghọta otu akụkụ nke ụlọ ọrụ aluminom, ma mata "aluminom na-acha akwụkwọ ndụ". Njirimara mara mma, na-akwalite mmepe dị elu nke ụlọ ọrụ aluminom nke mba m.
Adress: Nke 66-6, Shanshui Road, Eastern Industrial New Town, Ancheng Town, Pingyin County, Jinan, Shandong, China
Ekwentị: +86 15169199679